အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်ဂိတ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းက Act East မူဝါဒ အသက်ဝင်လာမှုကို ပြသနေဟု ဆို | မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ
အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်ဂိတ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းက Act East မူဝါဒ အသက်ဝင်လာမှုကို ပြသနေဟု ဆို
3 weeks6days ago Sun, 08/26/2018 - 16:31
Hits: 4777 times
မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းကို ချိတ်ဆက်သွယ်ထားသည့် နိုင်ငံတကာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်တစ်ခု ၂၀၁၈ သြဂုတ်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းက အရှေ့တောင်အာရှနှင့် တောင်အာရှဒေသတို့ အကြား လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာ အရေးပါသည့် အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ညွှန်ပြနေလျက်ရှိသည်။
မဇ္ဈိမ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးစိုးမြင့်သည် မကြာသေးခင်က ယင်း သမိုင်းဝင် ဖွင့်လှစ်မှု ဆိုင်ရာ အခမ်းအနားများတွင် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာမှ အိန္ဒိယ မဏိပူရ်သို့ ကုန်းလမ်းဖြင့် ဖြတ်ကျော်ကာ သြဂုတ် ၁၉ ရက်က Impact TV India ရုပ်သံ ထုတ်လွှင့်မှု ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သည်။
Imphal တွင် သြဂုတ်လ ၁၉-၂၀ ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အစီအစဉ်များ အရ မဏိပူရ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ဆိုင်ရာ အလားအလာများဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားများ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်လည်း ယခု အစည်းအဝေးများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နှင့် အိန္ဒိယ မဏိပူရ် တို့အကြား ချိတ်ဆက်သွယ်ထားသည့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်ကနေတဆင့် နှစ်ဘက် နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ပတ်စ်ပို့၊ Visa passage တို့နှင့် နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်သွားလာခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
ယင်းသည် အိန္ဒိယ-မြန်မာ ကော်ရစ်ဒါ၏ လက်တွေ့ကျသည့် သရုပ်သကန်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ နှစ်နိုင်ငံ အကြား စင်္ကြန်ကော်ရစ်ဒါကြောင့် ယခု နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှု အပိုင်းကို လုံးလုံးလျားလျား ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ရုံသာမက တောင်အာရှ နှင့် အရှေ့တောင်အာရှအကြား အချိတ်အဆက်များကိုပါ ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ယင်းအပြင် အိန္ဒိယ-တရုတ် ကုန်သွယ်ရေးအတွက်မှာမူ ဟိမ၀န္တာ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများနှင့် နှိုင်းစာပါက ယင်းသည် ပိုမိုလွယ်ကူသော ကုန်းလမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေမည်ဖြစ်သည်။
Impact TV Show ၏ panelists များဖြစ်ကြသော Act East Policy ကျင့်သုံးရေးဆိုင်ရာ State Level ကော်မတီမှ convenor ဖြစ်သည့် RK. Shivachandra ၊ Business Excellence Group (BEG) မှ အတွင်းရေးမှူး Hero Thokchom နှင့် မဇ္ဈိမ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးစိုးမြင့်တို့က နိုင်ငံတကာ နယ်စပ်ဂိတ် ဖွင့်လှစ်ခြင်း၏ ခေတ်မီဆန်းသစ်သည့် သဘောသဘာဝကို အလေးပေးပြောကြားသွားကြသည်။
ယင်းကို Look East Policy မှ Act East Policy သို့ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးလုပ်ဆောင်လာခဲ့သည့် အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် နာရင်ဒြာ မိုဒီ၏ Vision ကနေ ရရှိလာသည့် အသီးအပွင့် ရလဒ်တစ်ခုအနေဖြင့် လေ့လာစောင့်ကြည့်သူများဘက်က ရှုမြင်ကြသည်။ ယင်း၏ လက်တွေ့ကျသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ခြေလှမ်းများကြောင့် ယခုအခါ မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယအကြား ဆက်သွယ်ရေးကို တိုးတက်စေရုံသာမကာ အရှေ့တောင်အာရှနှင့် တောင်အာရှအကြား ဆက်သွယ်မှုကိုပါ ကူညီတိုးတက်စေခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယ၏ မူဝါဒ နှစ်ခုအကြား ခြားနားချက်ကို ယခုအခါ ပြည်သူတွေ တွေ့မြင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း RK. Shivachandra က ပြောသွားသည်။
“ ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ အရှေ့ဘက်ကိုပဲ မျှော်ကြည့်နေခဲ့ကြတာပါ၊ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ကျတဲ့ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး၊ တစ်ခါတစ်ရံ လူပြောမသန် လူသန်မပြော ဆိုတာမျိုးပေါ့” ဆိုပြီး ၎င်းက TV Show ကို ပြောသည်။
အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် အနေဖြင့် မျှော်ကြည့်ရှုခြင်းကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းအနေဖြင့် မကြာသေးခင်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ နယ်စပ်မှာ ပွင့်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
မဇ္ဈိမ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးစိုးမြင့်ကလည်း အိန္ဒိယ-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အပေါ် လွန်စွာ စိတ်ပါဝင်စားကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
“ အိန္ဒိယ-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ ဒီကိစ္စအပေါ် ကျွန်တော် စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာအပေါ် ထားတဲ့ အိန္ဒိယရဲ့မူဝါဒပိုင်းအပေါ်မှာပေါ့၊ အဲဒီမှာ အိန္ဒိယရဲ့ Look East မူဝါဒကို ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့တယ်၊ ခုတော့ အိန္ဒိယရဲ့ Act East မူဝါဒကို တွေ့နေရပါပြီ၊ သေချာတာကတော့ တက်ကြွတဲ့ ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ တက်ကြွတဲ့ အားပေးမှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့မြင်ထားကြပါပြီ၊ နှစ်နိုင်ငံစလုံးက ခေါင်းဆောင်တွေ ဆီကနေပေါ့၊ ၂၀၁၇ ထဲမှာ မဏိပူရ် ၀န်ကြီးချုပ် မြန်မာနိုင်ငံ လာလည်တာကို ကျွန်တော် အမှတ်ရမိပါသေးတယ်၊ အဲဒီတုန်းက ဒီ နိုင်ငံတကာနယ်စပ်ကို ဖွင့်လှစ်ဖို့ကိစ္စ သူပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်၊ ခုတော့ ဒီ နယ်စပ်ဂိတ်ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီပေါ့” ဆိုပြီး ၎င်းက ပြောသွားသည်။
ယခုလို နယ်စပ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှုပိုင်းမှာ အလားအလာတွေ အများကြီး မြင်ခဲ့ရကြောင်း BEG အတွင်းရေးမှူး Hero Thokchom ကလည်း ပြောသွားသည်။
“Structure တစ်ခုကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင် လုပ်မလဲဆိုတာကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ မှန်မှန်ကန်ကန် အစီအစဉ်ဆွဲနိုင်ပြီ ဆိုရင်ပဲ ဒါက ကြီးမားတဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ အဲဒီမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်” လို့ ၎င်းက ပြောသွားသည်။
လက်တွေ့ကျမှုတစ်ခုအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာဒေသလယ်ဗယ်မှာ ဆက်သွယ်ရေးတွေ ပိုမို တိုးတက်လာတော့မယ်လို့ ဦးစိုးမြင့်က ပြောသည်။
“ ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုး လက်တွေ့ကျတဲ့ အရာတွေကို ရှေ့ဆက်သွားနေတာကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ထားရပါတယ်၊တိုးတက်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ထားရပါတယ်၊ တကယ်တမ်းမှာတော့ လုပ်စရာတွေကတော့ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီကနေ့ ဒီအဆင့်ကို ရောက်လာတာကိုပဲ ကျွန်တော် တကယ် ၀မ်းသာမိပါတယ်၊ ကျွန်တော့်လို့ ရန်ကုန်က လူတွေ ဆိုရင်လည်း တမူးနယ်စပ်ထိ လာမယ်၊ မနက်ဖြန်မှာ ဒေလီ ကို ဘတ်စ်ကားနဲ့ သွားလို့ရမယ်၊ ဆိုတော့ ဒီအဆင့်ကို ရောက်လာတာကိုပဲ ကျွန်တော် တကယ်ပဲ ၀မ်းမြောက်မိနေပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည့် လယ်ဗယ်တစ်ခုအရ ဆိုပါက ယခု နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းက အာရှဒေသတွင် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ခေတ်သစ်တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ပြသလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
“ မြန်မာက အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်၊ အိန္ဒိယအတွက်ကတော့ ဒါက Act East ပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ Act West ပေါ့ ၊ ဒါက ကျွန်တော်တို့အတွက် အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်၊ ဒါက အရမ်းကြီးတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုပါ၊ ကျွန်တော်တို့ အနားမှာ လူဦးရေ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ရှိ ဈေးကွက်ရှိနေတာပါ” ဆိုပြီး ဦးစိုးမြင့်က ပြောသည်။
“ ဒါပေမယ့် ဒီ နယ်စပ်ဖွင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် ပြောတာက မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းအတွက်တင် မဟုတ်ပါဘူး၊ မြန်မာဆိုရင်လည်း အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ ဘေးနားမှာလည်း တရုတ် နိုင်ငံ ရှိတယ်၊ ဒီတော့ တရုတ်ဆီကနေ ကုန်စည်ပစ္စည်းတွေ ပိုပို ၀င်ရောက်လာတာကို ကျွန်တော်တို့ မြင်ရပါလိမ့်မယ်၊ မြန်မာကို ဖြတ်ပြီး အိန္ဒိယဆီကိုပေါ့၊ ဒီလိုပဲ အိန္ဒိယပစ္စည်းတွေကလည်း မြန်မာကို ဖြတ်ပြီး တရုတ်နဲ့ အခြား အာဆီယံ နိုင်ငံတွေဆီ သွားလာကူးသန်းတာတွေ မြင်ရဖို့ ရှိပါတယ်” ဆိုပြီး ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောသည်။
အာရှတွင် အဓိက အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး လူနှင့် ကုန်စည် ကူးသန်းဖြတ်သန်းမှုတွင် တိုးတက်မှုများ မြင်တွေ့ထားရသည်။ ထွက်ပေါ်လာသည့် တိုးတက်မှု ရလဒ်များအရ အုပ်စု သုံးခုဖြစ်သည့် အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့် အာဆီယံ နိုင်ငံများအနေဖြင့် အတားအဆီးများ လျော့ကျပြီး ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးပိုင်း တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့မြင်ထားရသည်။
ဒေသတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည်များအပေါ် မဇ္ဈိမ အယ်ဒီတာချုပ်က ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေခဲ့သည်။
“ လာမယ့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာလည်း ဒီလိုမျိုး တိုးတက်မှု တွေအများအပြား ကျွန်တော် တို့ မြင်ရပါဦးမယ်၊ ဒီ ဒေသတွင်း ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှုက တိုးတက်မှုတွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကို တွန်းပို့ပေးပါလိမ့်မယ်၊ ဒါ့အပြင် လူတွေ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို သွားလာကြတာ၊ လွတ်လပ်စွာ သွားလာကြတာကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
၎င်း မှတ်ချက်ပြုသည့်အတိုင်း သြဂုတ် ၈ ရက်မှ စပြီး မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယအကြား ပြည်သူတွေ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ သွားလာနေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေသတွင်း အကျိုးကျေးဇူးရပြီး ဆက်စပ်လွှမ်းခြုံနေသည့် မဟာအစီအစဉ်ကြီးတစ်ခု၏ ပထမခြေလှမ်းတစ်ရပ် ကို လှမ်းလိုက်နိုင်ပြီဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။